ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ဆီသို့ – Pann Satt Lann Books
ဤစာအုပ်သည် အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှ ကျင့်ထုံးများကို သင်နားလည်တတ်ကျွမ်းစေရန် အထောက်အကူပြု ရည်သန်ပြီး ပြုစုထားသော လက်ကိုင်စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် တင်ပြထားသော နည်းလမ်းများသည် မှတ်ကျောက်တင် စမ်းသပ်ခံပြီးသား နည်းလမ်းများဖြစ်သည်….
မူရင်းစာရေးသူသည် သေချာပေါက်ဖြစ်ထွန်းသော သဘောတရား(၂၆)ခုကို ရွေးချယ်၍ ယင်းသဘောတရားများအတိုင်း လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နည်းကို ဇောင်းပေး၍ တစ်ခုချင်း အကျယ်ချဲ့ ရှင်းပြထားပါသည်။ အခန်းတိုင်း၊ အခန်းတိုင်းသည် တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ ခြားနားသော သဘောတရားတစ်ခုစီကို တင်ပြထားသည်…
ဤစာအုပ်တွင်ပါသော အကြံပြုချက်များကို သင့်ဘဝအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ပြုပြင်အသုံးပြုပါ။ သင့်တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုကို ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီ(ကော်ပိုရေးရှင်း) အောင်မြင်ရေးကို ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ ဤစည်းမျဉ်းများသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဤအောင်မြင်ရေးသဘောတရားများကို သင်လိုက်နာပါလျှင် သင့်အကျိုးရှိသကဲ့သို့ သင့်မိသားစု၊ သင့်မိတ်ဆွေများနှင့် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်း အကျိုးရှိမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင် ဖြစ်ပေသည်။
5.9 x 0.4 x 8.2 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2020 ဖေဖော်ဝါရီလ (ပ-ကြိမ်)
“ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ဆီသို့” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply
မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်) စာအုပ်များ
၂၁ ရာစု မန်နေဂျာလက်စွဲ သို့မဟုတ် လက်တွေ့အသုံးချစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းများ